စညျးကမျးသတျမှတျခကျြမြား – Tourde Myanmar
ခရီးစဉျ လိုကျပါခွငျးအတှကျ ခရီးသှားဧညျ့သညျနှငျ့ ကုမ်ပဏီ နှဈဦးနှဈဖကျ လိုကျနာရမညျ့ စညျးကမျးမြား
တိုးဒီမွနျမာ၏ ခရီးစဉျမြားတှငျ လိုကျပါအားပေးမှုအတှကျ တိုးဒီမွနျမာမှ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါသညျ။ တဈနှဈထကျတဈနှဈ ပိုမိုကောငျးမှနျသော ၀နျဆောငျမှုမြားနှငျ့ ခရီးစဉျမြားကို ပိုမိုခြောမှစေ့ရေနျ တိုးဒီမွနျမာမှ ကိုယျစှမျး၊ ဉာဏျစှမျးရှိသမြှ၊ စတေနာ အပွညျ့အဝဖွငျ့ အစဉျကောငျးမှနျအောငျ ကွိုးစားလြှကျရှိပါသညျ။
ဤစညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားသညျ တိုးဒီမွနျမာမှ စီစဉျသော ခရီးစဉျမြားအပျေါတှငျ ပါဝငျသော ၀နျဆောငျမှုမြားအတှကျ အာမခံခကျြ အပွညျ့အဝပေးလိုကွောငျးနှငျ့ လိုကျပါအားပေးသညျ့ ခရီးသှားဧညျ့သညျအတှကျ တိုးဒီမွနျမာမှ စီစဉျသောဝနျဆောငျမှုမြားအား သိရှိနားလညျစရေနျ ရညျရှယျပါသညျ။ သို့ဖွဈပါ၍ ဤစညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားတှငျ ပါဝငျသော အခကျြအလကျမြားကို ခရီးသှားဧညျ့သညျမြား အနနှေငျ့ အခြိနျပေးဖတျရှုပွီး နားလညျသဘောပေါကျကွောငျးကို အတညျပွုခွငျးဖွဈပါသညျ။
ခရီးစဉျ စြေးနှုနျး အတညျပွုခွငျး
တိုးဒီမွနျမာမှ စီစဉျရောငျးခသြော ခရီးစဉျမြား၏ ပါဝငျသော ၀နျဆောငျမှုမြားအတှကျ ခရီးစဉျ ကုနျကစြရိတျကို အတိအကြ ဖျေါပွထားရှိသညျ့အကွောငျး ခရီးသှားဧညျ့သညျမှ နားလညျသဘောကျပါသညျ။ တိုးဒီမွနျမာမှ မညျသညျ့အကွောငျးကွောငျးနှငျ့မြှ ငှကွေေးအပိုကောငျခံခွငျး မရှိစရေနျ အပွညျ့အဝ တာဝနျယူပါသညျ။ ခရီးစဉျတှငျ မပါဝငျသောနရောမြားအတှကျ ၀ငျကွေးမြားအား ခရီးသှားဧညျ့သညျမှ ပေးဆောငျရနျ ဖွဈပါသညျ။
ဗီဇာလြှောကျရနျ လိုအပျသော စာရှကျစာတမျးမြားအား ဘာသာပွနျခ (Notary charges)
ဟိုတယျအခနျးတှငျးရှိ mini bar အသုံးပွုခ
ဘီယာ၊ ၀ိုငျနှငျ့ အခွားအအေးခမြား
ခရီးစဉျအတှငျးမပါဝငျသော မိမိ၏ အပိုအသုံးစရိတျမြား
၁။ ခရီးစဉျအတှကျ သတျမှတျစရံငှေ ပေးသှငျးပွီးမှသာ ခရီးစဉျတှငျ လိုကျပါရနျ စာရငျးပေးခွငျး အတညျဖွဈမညျဖွဈပါသညျ။
၂။ ခရီးထှကျခှာရနျ အနညျးဆုံး (၃၀) ရကျ အလိုတှငျ ကွိုတငျစာရငျးပေးသှငျးခွငျး ပွုလုပျပေးပါရနျ
၃။ စာရငျးပေးသှငျးရာတှငျ သကျဆိုငျရာ လယောဉျနှငျ့ ဟိုတယျ booking မြားပွုလုပျရနျ မိမိ၏ နိုငျငံကူးလကျမှတျ (မိတ်တူ) မြားကို ပေးရနျ၊
၄။ လယောဉျခရီးစဉျအတှကျ booking ပွုလုပျပွီးလြှငျ လကျမှတျထုတျရနျ နောကျဆုံးရကျကို အကွောငျးကွားပေးမညျ။ ၄ငျးလကွေောငျးလိုငျးမြား၏ စညျးကမျး သတျမှတျ ခကျြမြားအရ လကျမှတျထုတျပွီးလြှငျ လကျမှတျမြားသညျ ပွနျအမျးငှမေရသညျ့အပွငျ၊ ရကျစှဲ ပွောငျးလဲ၍လညျး မရပါ။ လကျမှတျထုတျရနျ နောကျကြ၍ အသဈပွနျတငျရသော booking အတှကျ ထပျတိုးကုနျကစြရိတျရှိပါက ခရီးသညျမှ ထပျဆောငျးပေးရမညျဖွဈပါသညျ။
စာရငျးပေးသှငျး၍ ခရီးစဉျ confirm (အတညျပွု) ပွီးလြှငျပွီးခငျြး၊ အောကျပါ စညျးကမျးခကျြမြားအတိုငျး ကွိုတငျ ငှပေေးခပြေေးရနျ လိုအပျပါသညျ။
(ခရီးစဉျမစမီအနညျးဆုံးရကျပေါငျး ၃၀ နှငျ့ အထကျ)	: ပထမအရဈ ၅၀ %
ဗီဇာတငျရနျ ပွငျဆငျ၍ ဗီဇာတငျပွီးသညျ့အခြိနျတှငျ : လကျကနျြ ၅၀%
စာရငျးပေးသှငျး၍ ခရီးစဉျ confirm (အတညျပွု) ပွီးမှ အကွောငျးတစုံတရာကွောငျ့ သတျမှတျခရီးစဉျတှငျလိုကျပါရနျ ပကျြကှကျ/ ဖကျြသိမျးခွငျးအတှကျ ပေးဆောငျရမညျ့ ဒဏျကွေးမြား၊
ဗီဇာမတငျခငျနှငျ့ လယောဉျလကျမှတျမြား မထုတျမီ : ဒျေါလာ ၁၅၀
ပွညျဝငျခှငျ့ အလညျအပတျဗီဇာလြှောကျထား ရရှိပွီးသူမြားအတှကျ
ခရီးစဉျ မစမီ ရကျပေါငျး ၆၀ နှငျ့ အထကျ : သတျမှတျစရံငှေ ဖွတျတောကျပါမညျ။
ခရီးစဉျ မစမီ ၄၅ ရကျ နှငျ့ အထကျ : ခရီးစဉျစြေးနှုနျး၏ ၅၀%
မညျသညျ့ အကွောငျးပွခကျြဖွငျ့ မဆို ပွညျဝငျခှငျ့ အလညျအပတျဗီဇာ ငွငျးဆိုခံရသူမြားအတှကျ ဗီဇာကွေး ပွနျလညျရရှိမညျ မဟုတျပါ။ ဗီဇာငွငျးဆိုခံရမှုသညျ၊ တိုးဒီမွနျမာမှ ၀နျထမျးမြား၏ ပေါ့ဆမှု၊ တိုးဒီမွနျမာမှ ခရီးစဉျအတှကျ လိုအပျသော စာရှကျစာတမျး ပံ့ပိုးမှု ပေါ့လြော့မှုကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာခဲ့ပါက ဗီဇာကွေး (USD 80) နှငျ့ ဘာသာပွနျ ၀နျဆောငျခမြား နှုတျယူပွီး ခရီးစဉျကုနျကစြရိတျ သှငျးထားသောငှအေား ပွနျလညျ ထုတျပေးမညျ ဖွဈပါသညျ။ ဗီဇာငွငျးဆိုခံရမှုသညျ၊ ခရီးသှားဧညျ့သညျ၏ ကိုယျရေးအခကျြအလကျ ထိနျခနျြမှု၊ မမှနျမကနျ ဖွညျ့သှငျးမှုနှငျ့ ခရီးသှားဧညျ့သညျ၏ ကိုယျရေးရာဇဝငျကွောငျ့ ငွငျးပယျခံရခွငျးအတှကျ တိုးဒီမွနျမာတှငျ ခရီးစရိတျပွနျလညျ အေ​ပေးအပျရနျ မညျသညျ့တာဝနျမှ မရှိကွောငျး ခရီးသှားဧညျ့သညျမှ နားလညျသဘောပေါကျပါသညျ။
ခရီးစဉျလိုကျပါရနျ အတညျပွု စရံငှပေေးသှငျးပွီးပါက အထကျပါ စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားအား အလိုအလြောကျ လိုကျနာပွီးဖွဈကွောငျး ခရီးသှားဧညျ့သညျမှ နားလညျသဘောပေါကျပါသညျ။
အမှတျ(၁၀၉)၊ ပထမထပျ၊ စဉျ့အိုးတနျးလမျး၊ လသာမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
Phone : 01 250 734, 378 503, 378 127
Viber : 09779999146, 09779999147
မန်တလေးရုံးခှဲ - စံပယျဆောငျ အခနျး(၁)၊ ၂၃ x ၂၄ ကွား, ၈၈ x ၈၉ ကွား
မန်တလေး ဖုနျး - 02-31137
Tourde Myanmar Facebook Posts
Tour De Myanmar Travels & Tour Co. Ltd. Tour De Myanmar Travels & Tour Co. Ltd. is at Club Med Kani Maldives.
🏖မော်ဒိုက်ဆိုတာနဲ့ ဟန်းနီးမွန်းတွေအတွက်ပဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်ပြောရင်ယုံမှာလား မယုံပါနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လိုက်ပါ .............🏖 [Trip Review]
💕 ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ ဒီကမ်းခြေအကြောင်းကို ကမ်းခြေချစ်သူတွေအတွက် မျှဝေလိုက်ပါပြီနော်။ နွေရာသီလိုအချိန်မှာ ကမ်းခြေသွားတာ မထူးဆန်းပေမယ့် လေယာဉ်လက်မှတ်ဈေးကြီးတာရယ်၊ ကမ်းခြေကိုအပန်းလာဖြေတဲ့ ဧည့်သည်များတာကြောင့်ရယ် ဓါတ်ပုံတောင် ကောင်းကောင်းရိုက်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီခေါက်တော့ မိုးမရွာ၊ နေမပူ၊ ကြားကာလ ဇွန်လမှာ လေယာဉ်လက်မှတ် ဈေးချနေတာရယ်၊ Club Meb Resortက ပရိုမိုးရှင်းပေးတဲ့ အချိန်ရယ်ကြောင့် အရမ်းတန်လို့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရှိတဲ့ ပင်လယ်ဘုံဗိမ္မာန် ၊ ကျွန်းများအားလုံးရဲ့သခင်လိုတောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်လိုက်ချင်တဲ့ မော်ဒိုက်ကျွန်းလေးကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ 🌈🏝
မော်ဒိုက်ကို ရန်ကုန်ကနေသွားဖို့အတွက် လေကြောင်းလိုင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ Asia Aisa , Thai Airways , Singapore Airline , Bangkok Airways ပဲဖြစ်ပါတယ် …ကိုယ်ကတော့ ဈေးသက်သာတာရယ် ၊ connection ကောင်းပြီး အချိန်ကောင်းတာရယ်ကြောင့် ဘန်ကောက်အဲဝေးနဲ့ သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ကောက်အဲဝေးရဲ့ အစောဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ မနက် ၅နာရီ ၅၀ လေယာဉ်နဲ့ ဘန်ကောက် သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ connection Flight ကြောင့် Boarding ပြန်ဝင်ပြီး မော်ဒိုက်ကို ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ် … လေယာဉ်ပေါ်မှာကျေွးတဲ့ အရသာရှိတဲ့ အစားစာကိုစားပြီး ၃နာရီကြာပျံသန်းလာပြီးလေယာဉ်ဆင်းသက်တော့မဲ့အချိန် အောက်မှာရှိတဲ့ ပြာလဲ့လဲ့ ပင်လယ်ပြင်ကြီး ထဲက ကျွန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ရင်ခုန်သံတွေ ထိန်းမရအောင်ပါပဲ။🛥💦
မော်ဒိုက်ရဲ့ Male အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်လေးကတော့အရမ်းပဲချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ အဲကွန်းမသုံးပဲ သဘာဝလေတွေနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Arrival Hall ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ immigration ကိုတန်းစီချိန်မှာ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ immigration တွေနဲ့ မတူဘဲ နှစ်ယောက်တစ်တွဲ အ၀င်တုံးလေးတွေထုပေးနေတဲ့ ပုံစံကိုမြင်ရတော့ လေဆိပ်ထဲမှာတင် အရမ်းတွေရိုချင်နေပါပြီ။🛥💦
ကဲ့ ခရီးဆက်လိုက်အုန်းမယ်နော် ...........💞😍
ကိုယ်ရဲ့  luggage လေးကို ရွေးပြီးတာနဲ့ အပြင်လဲရောက်ရော Club Meb ရဲ့ ၀န်ထမ်မှ ဖော်ရွေပျူဌာသော အပြုံးများနဲ့ welcome board စာရွက်လေးကို ကိုင်ပြီး စီးကြိုနေပါတယ်။ အပြင်ဘက်မှာအခြား Resort ကောင်တာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်.. အမှတ် (၆၁) မှာရှိတဲ့ Club Meb ကောင်တာမှာကိုယ်ရဲ့ confirmation ဘောင်ချာနဲ့ passport လေးပြရပါတယ်။ ပြီးမှ သူတို့ကိုယ်တိုင် Speed boad ရှိတဲ့ ဆိပ်ကမ်းကိုခေါ်သွားပြီးတာနဲ့ မိနစ် ၃၀ လောက်စီးပြီး Club Meb Kani ကျွန်းကိုရှောက်ရှိပါတယ် ။ Speed boat ပေါ်ကဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ လှပသော အပြုံးများနဲ့ စီးကြို ကာ Welcome Drink လေးတိုက်ပြီး တာနဲ့ Resort ရဲ့ key လက်ပတ်လေးပတ်ပေးပါတယ် အပြန်ထိမဖြုတ်ရပါဘူး။ ဒီလက်ပတ်လေးနဲ့ ကိုယ်တည်းခိုမဲ့ အခန်းအဖွင့်အပိတ်လုပ်ရပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေရဲ့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့ water activity , Bar , restaurants တွေ ဘယ်အချိန်ဖွင့် ဘယ်အချိန်ပိတ် တဲ့အကြောင်းတွေပါမကျန်အကုန်လုံး ရှင်းပြပြီး ကိုယ်တည်းမဲ့ ရေပေါ်ဘန်ကလိုရှိတာနေ၇ာကိုလိုက်ပြပေးပါတယ်။
2 N3D PACKAGE ၀ယ်ထားတဲ့အတွက် အစဆုံးဝန်ဆောင်မှုအကုန်ပါပြီးသားမလို အစားသောက်တွေ Drink တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်လဲ အားလုံးကြိုက်သလောက်စား၊ ကြိုက်သလောက်သောက်လို့ရပါတယ်။ 🍷🍻🍺
မနက်စာအတွက်ဆို၇င် အခန်းထဲမှာကိုယ်ဘာသာ စားချင်ရင်လဲဘယ်အချိန် ဘာစားမယ်ဆိုတာလေးကို အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ BF စာရွက်လေးမှာအမှန် လုပ်ပေးပြီးတာနဲ့ အပြင်ဘက် box လေးမှာထည့်ပေးထားရင် သူတို့ လာပို့ပါတယ်။ အပြင်မှာထွက်စားရင်လဲကြိုက်တာစားလိုရအောင် buffet ခင်းပေးထားပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေဆိုရင်လဲ မနက် ၇နာရီကနေ ၁၀နာရီထိဖွင့်ထားပေးပြီးနောက်နေ့လည်စာအတွက် ၁၂နာ၇ီကနေ ၀၂ နာရီထိဖွင့်ထားပါတယ်။ တကယ်လိုကိုယ်မနက်စာတို့ နေ့လည်စာတို့ စားဖို့ မမှီရင်တောင် ၁နာရီကနေ ၄နာရီ ထိ late lunch အနေနဲ့ Restaurants တစ်ခုထပ်ဖွင့်ပေးထားပါတယ် နောက်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာေ တာ့ afternoon အတွက်ဆိုပြီး ၄ နာရီ ကနေ ၆နာရီထိ ပြီးတော့ Dinner ဆိုပြီး ၇နာ၇ီခွဲကနေ ၉နာ၇ီ ၊ after dinner ဆိုပြီး ၉နာရီခွဲကနေ ၁၁နာရီထိ ထပ်ပြိးဖွင့်ပေးထားပါတယ် အစားသောက်ကတော့ လုံးဝ လုံးဝပူစရာမလိုသလို ထပ်မံဝယ်စားစရာလဲမလိုပါဘူး။ အစားသောက်တွေကလည်း Indian / European / Japanese / thai / Chinese / seafood တွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အပြင် ဘူးဖေးလည်းကျွေးသလို set Menu နဲ့လည်း အကုန်၇ပါတယ်။ ကိုယ်တွေလို အစားတလိုင်းအတွက် ကတော့ လုံးဝ အကြိုက်ပေါ့ကွယ်။ အစားသောက်တင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကမ်းခြေမှာအပန်းဖြေပြီး အေးဆေးသောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လဲ Main swimming Pool ရဲ့ ဘေးမှာရှိတဲ့ Sunset Bar ဆိုပြီး မနက် ၉နာရီကနေ ည ၈နာရီခွဲထိ ဖွင့်ပေးထားပါတယ် … wine / cocktail / beer နဲ့ အခြားမြောက်များစွာသော Drink တွေအတွက် Free Flow ပါ ။ ပြီးရင် လာလည် customer တွေမပျင်းရအောင် Music / Dj / night entertainment တွေကို join ပြီးသောက်ဖို့ ည ၇ နာရီကနေ ၁ နာရီထိနောက် Bar တစ်ခုထပ်ပြီးဖွင့်ပေးထားလို အိုဘာပြောကောင်းသလဲ မမေးနဲ့။
ပထမဆုံးရောက်လို ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေမလားဆိုပြီး ဘာမှတေ့ာစိတ်ပူစရာမလိုဘူးနော်။ ကိုယ်တွေတည်းတဲ့အခန်းလေးထဲမှာ မနက်ဖြန် ဘာ plan တွေရှိတယ် ဘာ entertainment တွေရှိတယ်ဆိုတာ အခန်းသန့်ရှင်းပေးပြီးတာနဲ့ စာပွဲလေးပေါ်မှာ စာရွက်လေးတင်ထားတယ်။ အခန်းသန့်ရှင်းမှုက ၁၀၀ % ပါ မနက်ရောညရောလာရှင်းပေးလို အရမ်းစိတ်တိုင်းကျခဲ့ပါတယ်။
Acitvity တွေအနေနဲ့ Snorkeling တွေ ရွက်လှေစီးတာတွေ ကနူးစီးတာတွေလဲ Freeလုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့တာတွေလုပ်ရင်တော့ Swimming test အရင်လုပ်ပြရပါတယ်။ အခြား water sport activity တွေအများကြီးရှိပါတယ်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ရင် ကမ်းခြေမှာ ၄ရက်လောက်နေတာတောင် စုံမှာဟုတ်ဘူးရယ်။ အခြား Group activity အနေနဲ ညနေ၄နာရီအဖွဲ့ လိုက် yoga လုပ်တာတွေ ၊ ကမ်းခြေမှာ Dance lesson ပေးတာတွေ၊ Zumba ကတာတွေအကုန်လုံးကို လည်းလိုက်join လိုရလို ကိုယ်ဆို အခန်းထဲမှာကို မရှိဘူး တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်join တာ။
အရမ်းပျော်ဖို့ ကောင်းလွန်းလို့ ၊ တစ်ချိုရက်တွေ မှာ Pool party လုပ်တာတွေနဲ့ ကြုံရင်လုံးဝလွတ်ကဲတာ ရေကူးဖို့အတွက်ဆိုရင်လဲ ကိုယ်တွေရဲ့ ဘန်ဂလိုအောက်မှာ ပင်လယ်ရေကိုစိမ်လိုရသလို ၊ main pool မှာလဲရေကူးပြီး ၀ိုင်သောက်ရင်း နေ၀င်ချိန်ကို ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ဖီလင်က လုံးဝမမေ့နိုင်အောင်ပါပဲ။ နောက်နေ့မှာတော့ ညနေဆည်းဆာကို ကြည်လို၇အောင် ပင်လယ်ပြင်ကြိးထဲမှာ Sunset cruiseစီးရင် တိုက်တန်းနစ်ထဲက မင်းသားလေးကိုတောင် ကိုယ်ရှာနေမိခဲ့ပါတယ်။🤣 မနက်ဘက်ဆိုရင်လဲ Gym တွေဆော့လိုရအောင် ထားပေးထားလို အစားကြိုက်ပြီး ၀ိတ်ထိန်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် so good ပေ့ါနော်။
ည ၈နာရီဆိုတာနဲ့ မတူတဲ entertainment တွေကို မြင်တွေရပြီး သာယာသောလေညင်းနဲ့အတူ ဖွင့်ထားတဲ့ Music လေးမှာလိုက်ပါယိမ်းညွှဲ့ရင်း စိတ်ကြိုက်သောက်သုံးနိုင်အောင် ဖွင့်ထားတဲ့ဘားမှာ ဇိတ်ကျနေတာပေါ့ ။ ပွဲစရင်အရင်ဆုံးစင်ပေါ်မှာ Club Meb သီးချင်းလေးဖွင့်ပြီး အောက်မှာရှိတဲ့ customer တွေပါလိုက်ကလိုရအောင် သင်ပေးလို ကိုယ်ဆို ခဏတာ Dancer သမား လေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တွေသွားတုန်းက ပထမရက်မှာCabaret Show ဖြစ်လို အားလုံး ပန်းပွင့်ပါတဲ့ အ၀တ်စားတွေဝတ်ပြီး party မှာဆင်းနွဲကြပါတယ် …နောက်တစ်၇က်မှာတေ့ာ Glow & Balck party ဖြစ်ပြီး Dancer တွေနဲ့အတူ ဧည်သည်များပါ အမဲရောင်ဝတ်ကြပြီး မျက်နာမှာ Glow တွေချယ်သခံခဲ့ရတာကို တစ်သက်မမေ့နိုင်ပါဘူး …. ညဘက်တိုင်းရဲ့ party မှာ Dancing Technic တွေတောင်အများကြီး သင်ယူခဲ့ပါတယ် ။
အော်မေ့တော့မလို 😁 အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲစိတ်ပူစရာလိုဘူးနော်
ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးကိုwifi လွင့်ထားပြီး လိုင်းလဲကောင်းလို FB စိတ်ကြိုက် Live တွေလွင့်လိုရပါတယ်လို .............
*🤩🤩ထူးခြားတာလေးတစ်ခုပြောပြအုန်းမယ်နော် မနက် gym trainer ကြီးက ညဘက် Party မှာ performanceလုပ်နေတဲ့ Dancer လေးအပြင် မနက်မှာ General Manager လုပ်နေတဲ့ သူ က ညဘက်မှာ presenter ဖြစ်နေလို သူတို့လို အလုပ်ပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာကြည့်ပြီး ကိုယ်တောင် Motivation ဖြစ်မိပါတယ်။
ကိုယ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာ ဆိပ်ကမ်းက Speed Boat လေးရှေမှာအားလုံးပဲ See you again သီးချင်းလေးဖွင့်ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ မပြန်ချင်လောက်အောင် နွေးထွေးမှုတွေကိုပေးခဲ့လို ဒီတစ်ခေါက်ခရီးစဉ်မှာ ကိုယ်အတွက် အမှတ်တရတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .......
Club Meb မှာရှိတဲ့ Top 10 Instagrammable spots
အဲတာက တော့ ဓာတ်ဖမ်းမဲ့သူတွေအတွက် ပေါ့နော်
#sunset overwater swings #I Heart Kani #Endles Turquoise Pier#MantaBoardwalk #Beach by sunset #Gone surfing#HammockinPalm Grden #Manta Lounge ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး Instagram ပုံလေးရိုက်လိုကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေနော်
#waikyaw ... See MoreSee Less
Tour De Myanmar Travels & Tour Co. Ltd.
💕ရင်ခုန်သံတွေ ထပ်တူကျမယ့် ဒါနန်း💕
ဗီယက်နမ် တောင်ပိုင်း+အလယ်ပိုင်း ခရီးစဉ်
(ဒါနန်း -ဘန်နာတောင်ကုန်း- ဟွေအန်း - ဟိုချီမင်း)
18-22 July 2019 💰640 USD ✈Vietnam Airlines
🧚‍♀ဒါနန်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အရမ်းလှတဲ့ လက်ဝါးတံတားကြီးရယ်၊ ပြင်သစ်ပုံစံတည်ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ၊ ရဲတိုက်တွေရယ်ကို အရင်ဆုံးပြေးမြင်မှာ အသေအချာပါဘဲ။ Pre Wedding ရိုက်လို့လှတဲ့ အရမ်း Ro တဲ့နေရာတွေ၊ Selfie ရိုက်ဖို့လှတဲ့ နေရာလေးတွေ အများကြီးရှိတာမို့ ငွေကုန်ခံပြီး သွားရတာနဲ့တန်အောင် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ပါလာမှာလဲ အသေအချာပါဘဲ။ ဒါ့အပြင် ဟွေ့အန်းလို့ခေါ်တဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့လေးကိုလဲ သွားလည်ကြဦးမှာ။ ဆိုင်ဂုံလို့ခေါ်တဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့ကို လည်ပေးမယ့် အစီအစဉ်ကောင်းများစွာ ပါဝင်မယ့် တိုးဒီရဲ့ ဇူလိုင်လခရီးစဉ်လေး ထွက်လာပါပြီနော်။ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်း လေယာဉ်ဆိုလဲ Standard Airlines လေးနဲ့မှ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ သွားချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အရမ်းအဆင်ပြေစေမယ့် ခရီးစဉ်လေး ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
🏰ပြင်သစ်မြို့ငယ်လေးလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ Bana Hill
🏰ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကစားနည်းမျိုးစုံကစားနိုင်တဲ့ Fantasy Park
🏰ရွှေလက်ချောင်းတံတား Golden Bridge
🏰ဒါနန်းမှာရှိတဲ့ Han Market
🏰စကျင်ကျောက်တောင်ဟုနာမည်ကြီးတဲ့ Marble Mountain
🏰ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံး Guan Yin Buddha နှင့် Linh Ung ဘုရားကျောင်း
🏰အလှပဆုံးသောကမ်းခြေ My Khe Beach
🏰နှစ် ၁၀၀ ကျော်ရှေးဟောင်းအိမ်နှင့် ဈေးဆိုင်လေးများ
🏰ဆိုင်ဂုံမှာရှိတဲ့ Nitre Dame Catheral
🏰ပြင်သစ်ခေတ်လက်ရာ Post Office
🏰စိတ်ကြိုက်ဈေးဝယ်ယူဖို့ Ben Tanh Market,Saigon Square,Takashimaya Shopping Mall ... အစရှိတဲ့ နေရာအစုံ ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
💁‍♀လူပြည့်မြန်လို့ အမြန်လေးစာရင်းပေးသွင်းထားမှ အဆင်ပြေမှာပါနော်….
💟 Vietnam လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် လေယာဉ်လက်မှတ် အသွားအပြန်
💟 လေယာဉ်ပေါ်တွင် အစားအသောက်ဖြင့် ဧည့်ခင်းတည့်ခံခြင်း
💟 ခရီးဆောင်အိတ် ကီလို (၂၀) သယ်ဆောင်ခွင့်
💟 ခရီးစဉ်တွင် ဖေါ်ပြထားသော နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ နှင့် ညစာများ
💟 ဟိုတယ်တွင် တည်းခိုခ (တစ်ခန်းလျှင် ၂ ဦးနှုန်း)
💟 ခရီးစဉ်တွင်ပါရှိသော ၀င်ကြေးများ
💟 မြန်မာနိုင်ငံမှ အုပ်စုခေါင်းဆောင်
💟 ဒေသဆိုင်ရာ ဧည့်လမ်းညွှန်
☎ 📲 📱ခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို Viber, Facebook Chat Box တို့မှလည်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
တိုးဒီ နဲ့ GO ပြီ။
အမှတ်(၁၀၉)၊ ပထမထပ်၊ စဥ့်အိုးတန်းလမ်း၊
ဖုန်း - 01-378503, 378127, 250734
Viber : 09777250050,09779999146,09779999147 ... See MoreSee Less
Tour De Myanmar Travels & Tour Co. Ltd. Tour De Myanmar Travels & Tour Co. Ltd. with Let’s Explore With Poeei.
'Immigration ကနေ လှည့်ပြန်တာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင်'
ချစ်တို့ရေဒီနေ့တော့ ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားသွားမယ့်ချစ်တွေအတွက် ရောက်ရှိကဒ် Arrival Card ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ် သိပြီးသား လူတွေအတွက် ဘာမှမဟုတ်ပင်မဲ့ မသိရသေးတဲ့လူတစ်ချို့မှာတော့ လေဆိပ်မှာတင် အဝင်မခံပဲ ပြန်လွှတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ပျက်မျိုးတွေရှိနေပါတယ်
ပိုးအိလည်းလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်က ညီမတစ်ယောက်က လေဆိပ်မှာတင် ပြန်လွှတ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုလာပြောရင်းနဲ့ ချစ်တို့သိရအောင် ပြန်လည် sharing လုပ်လိုက်ပါတယ်နော်
Arrival Card (ရောက်ရှိကြောင်းကဒ်ပြား)
ဘယ်နိုင်ငံသွားသွား လေယာဉ်ဆင်းတာနဲ့ immigration မဝင်ခင် ဒီကဒ်ကိုဖြည့်ရပါတယ်
Airline တွေလည်း လေယာဉ်ပေါ်မှာဒီကဒ်လေးတွေလိုက်ဝေပါတယ် ကြိုတင်ဖြည့်ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပါနော်
လေယာဉ်ပေါ်မှာမဖြည့်မိရင်လည်း immigration မဝင်ခင်မှာ ကဒ်လေးတွေကို တွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
🔹 လုံးဝမဖြည့်တတ်ဘူးဆိုလျှင်ဘေးနားကလူကိုအကူညီတောင်းနိုင်ပါတယ် ပိုးအိဆိုခရီးသွားရင် ဘေးလူချို့က arrival card ဖြည့်ပေးဖို့ အကူညီလာတောင်းခံရတာ ခဏခဏပါပဲ အာ့ဆိုတော့မသိသေးတဲ့ချစ်တို့ဆက်ဖတ်လိုက်ရအောင်
🔹ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဖြည့် သူများဖြည့်ဖြည့် information ပြည့်စုံဖို့လိုပါတယ်
❌ လာမေးတဲ့ ညီမလေး ပြန် အလွှတ်ခံရတာလည်း information မပြည့်စုံလို့ဖြစ်ပါတယ် ဘာတွေလည်းဆိုတာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်
ပိုးအိ အကြမ်းဖြင်း အရေးပါတဲ့ တစ်ခုခြင်းစီကို မြန်မာလိုပြန်ပေးမယ်နော်
✅ Family name (Surname) and First name (Given name) & Middle name
Translation - မိသားစုနာမည် နှင့် အရှေ့ နှင့် အလည်နာမည်
တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ First name နဲ့ family name ဆိုပီးရှိပါတယ် family name ကတော့မျိုးရိုးနာမည်ပေါ့နော် ပိုးအိတို့မြန်မာမှာတော့ first name နဲ့ last name တွေမရှိတော့ဖြည့်ရတာနည်းနည်းကွကျတယ်ပေါ့နော် စိတ်တော့မပူပါနဲ့ ဖြည့်လို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်
ဥပမာပေးရရင် ပိုးအိနာမည်က Poeei Myat Kyaw Thu ဆိုတော့
First name - Poeei
Family name or last name - Myat Kyaw Thu
ဥပမာ ဟေမာစိုး ဆိုရင်
First name - Hay Mar
Family name or last name - Soe
ကိုယ့်ကြိုက်သလိုဖြည့်လိုရပါတယ် ဒါပင်မဲ့ နှစ်ခုခွဲပီး first name နဲ့ family name ကောဖြည့်မှရပါမယ်
🔹Middle name - ဖြည့်စရာမလိုပါ
✅ Date of Birth
🔹 DD - ရက်
🔹MM - လ
🔹YYYY - နှစ်
✅ Passport no.
လူမျိုး - Myanmar လို့ဖြည့်ပါ
Boarding pass မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်
🔹 male (ယွကျားလေး)
✅Purpose of Visit
City / State - ဥပမာ Mandalay
Country of residence - Myanmar
✅Country where you Boarded
ဥပမာ - မြန်မာကလာရင် Myanmar လို့ရေးပါ
✅Length of Stay
✅Address in (Example) Thai
🔹လာမေးတဲ့ညီမလေး ပြဿနာတက်သွားတာ လိပ်စာမဖြေနိုင်လို့ပါနော်
🔹ဖုန်းမှာ သို့မဟုတ် စာအုပ်မှာ ထည့်မှတ်သွားပါ
🔹လိပ်စာဖြည့်မှ ကိုယ်ဘယ်မှာနေမှာလဲ immigration ကသိနိုင်မှာမလို့ပါ
🔹လိပ်စာမဖြည့်လျှင် ဘယ်မှာနေမလဲ မေးပါတယ်ချစ်တို့ရေ မဖြေနိ်ုင်လျှင်ပေးဝင်မည်မဟုတ်ပါ
🔹သူငယ်ချင်းအိမ်မှာတည်းမယ်ဆိုရင်လည်း သူငယ်ချင်းရဲ့ ဖုန်းနဲ့လိပ်စာကိုသေချာမှတ်ပါ
❌ တစ်ခါတစ်လေ immigration က စိတ်တိုင်းမကျရင် ကိုယ်နေမဲ့နေရာက Hotel ဆိုရင် Hotel ဖုန်းဆက်ပီး booking လုပ်မလုပ်မေးတတ်သလို သူငယ်ချင်းအိမ်တည်းမယ်ဆိုလည်း သူငယ်ချင်းဖုန်းကိုသိနေရမှာဖြစ်ပီး တည်းမတည်းဆိုတာ ဖုန်းဆက်မေးတတ်ပါတယ် ဒီလိုမျိုးကဖြစ်တာအရမ်းရှားပင်မဲ့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်
ဥပမာ စလုံးမှာကို postal code ၆လုံးရှိပါတယ်
✅Telephone (contact number) & email
ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ email ဖြည့်ပါ
✅ Visa No
Visa နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင် visa နံပါတ်ဖြည့်ပါ
✅Arrival card ပါတဲ့
Yes or No မေးခွန်းတစ်ချို့
🔹Have you been to Africa or South America during the last6days?
အာဖိရိက သို့ တောင်အမေရိက ကို လွန်ခဲ့၆ရက်က သွားခဲ့ပါသလား
🔹Have you ever usedapassport under different name to enter (example) Singapore?
passport ကိုတစ်ခြားနာမည် နှင့် ဒီနိုင်ငံကိုဝင်ဖူး
🔹Have you ever been prohibited from entering (example) Singapore?
ဒီနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်တုန်း တားမြစ်ခြင်းခံရဘူးပါသလား?
ပိုးအိ သိတာလေးတွေ ဝေမျှပေးတာလေးတွေ အားလုံးအတွက် အသုံးတည့်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ရင်း...
အဆင်ပြေချောမွေ့ သာယာပျော်ရွှင်စွာ ခရီးသွားနိုင်ကြပါစေလို့.. ❤️❤️❤️
(Let’s Explore With Poeei စာမျက်နှာလေးမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ Vlogတွေနဲ့ ညီမလေးကို အားပေးလိုက်ကြအုံးနော်။)
#tourdemyanmar #poeeimkt #myanmarblogger ... See MoreSee Less
"တိုးဒီနဲ့ Go ပြီ!" ရဲ့ chat box ထဲမှာ ခရီးစဉ်တွေအကြောင်း စပ်စုလို့ရပြီနော့်။ ဘယ်လိုအလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်သလဲ? Video လေးကို ကြည့်လိုက်ရအောင်!
#chatbot #automatic #reply #message #tourdemyanmar ... See MoreSee Less
အီဂျစ်ခရီးစဉ်လေးမှာ အမှတ်တရတွေတွေ ရိုက်လာတာလေး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှု့လိုက်ရအောင်။ မိတ်ဆွေတို့ ခရီးသွားဖို့ "တိုးဒီနဲ့ Go ပြီ!" ကို သတိရလိုက်ပါ။
Travel with #TourDeMyanmar⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Camera - Saung Oo(Esther)
Editing - K Thu Ra
YouTube link - youtu.be/yiYtvzzkisw ... See MoreSee Less
© 2016 BY TOURDE MYANMAR. ALL RIGHT RESERVE.
အမေရိကား ခရီးစဉ်ဥရောပ ၆ နိုင်ငံ ခရီးစဉ်ဥရောပ ၃ နိုင်ငံခရီးစဉ်ဂျပန် ခရီးစဉ်ကိုရီးယား ခရီးစဉ်ဘာလီ ခရီးစဉ်ဘန်ကောက် ခရီးစဉ်ရှန်ဟိုင်း ခရီးစဉ်တရုတ်ပြည် ခရီးစဉ်ဗီယက်နန် ခရီးစဉ်ဒူဘိုင်း ခရီးစဉ်အီဂျစ် ခရီးစဉ်စင်္ကာပူ ခရီးစဉ်ထိုင်ဝမ် ခရီးစဉ်ကမ္ဘောဒီးယား ခရီးစဉ်